‘पोइलजान पाम’ गित पचाउने एमालेलाई पशुपति शर्माको ‘लुटतन्त्रको’ गित हजम भएन! « Postpati – News For All
‘पोइलजान पाम’ गित पचाउने एमालेलाई पशुपति शर्माको ‘लुटतन्त्रको’ गित हजम भएन!
केबी गुरुङ । एमालेमा पार्टी प्रवेश गरेपछि सांसद भएकी गायिका कोमल ओलीको ‘पोइल जान पाम’ भन्ने गित एक जमानामा निकै चर्चामा थियो । जसलाई कम्युनिष्टहरु छाडा भनेर धारे हात लगाउथे । उक्त तिज गित बजारमा आइसके पछि समय सापेक्षित सुहाउदो नभएको भन्दै महिला अधिकारबादीहरुले उक्त गितलाइ प्रतिबन्द समेत लगाएका थिए ।
ओलीको गितले महिलाहरुको अपमान गरेको अधिकारकर्मीहरुको ठम्याई थियो । अझ बिशेषगरि कम्युनिष्ट खेमाका महिलाअधिकार कर्मीहरु उक्त गीतप्रति निकै रुष्ट भएका थिए ।
समयक्रमले कोमल ओलीलाई राजनीतिज्ञ बनायो । देशमा राजतन्त्र फर्काउन र हिन्दु राष्ट्र बनाउने भन्दै राप्रपाको पार्टीमा प्रवेश गरेकी कोमल ओलीलाइ फेरी सांसद भन्ने धंङ्गधंङ्गी जागेपछि उनका साक्खै गाउले एमाले नेता शंकर पोख्रेललाइ ज्याक लगाइन । राजनीतिक दाउपेजलाइ उपयोग गर्दै हालका प्रदेश पांचका प्रदेश प्रमुख संखर पोख्रेलको राजनीतिक च्याप्लुसीमा केपी ओलीले कोमल ओलीलाई एमालेमा प्रवेश गराए ।
जुनबेला तत्कालिन एमाले पार्टी कार्यकर्ता भित्रैबाट कोमल ओली प्रति कटुआलोचना भएको थियो ।
छाडा संस्कृतिको ‘सं’ देखि आफुलाई अछुतो राख्ने कम्युनिष्टका लागि कोमल ओलीको ‘पोइल जान पाम’ भन्ने गित सहजै हजम हुँदा आफुलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरु लाचारभइ निरिह बनेका थिए, अझै पनि निरिह बनिरहेका छन् ।
उनको पार्टी प्रवेशले एमालेको चम्किलो कम्युनिष्ट बैचारिक सानमा भुत्य खिया लागेकै हो ।
त्यसपछि बिशेष गरि पुर्वएमालेलाइ कोमल ओलीका पोइल जान पाप, झ्वाँक तन्नेरी जस्ता समाज भडुवा तथा उछ्रिङ्कल गितहरु होनाहार कम्युनिष्ट ब्यबस्था निर्माणका लागि जनबादी गित जस्तै बने ।
अर्थात हालको बहुमत सहितको कम्युनिष्ट ब्यबस्था निर्माणको लागि कोमल ओलीको झ्वाँक्क तन्नेरी र पोइल जानापाम भन्ने गित चुनावी प्रचारका लागि क्रान्तिकारी गितमा जबर्जस्त परिणत गराइयो ।
तर जव सडकमा चिच्याउने कम्युनिष्टहरुको बहुमतको सरकार बन्यो, तव अचेल उनैलाइ क्रान्तिकारी शब्दहरु देखि डर लाग्न थालेको छ । बरु पोइल जान पाम र झ्वाँक तन्नेरी जस्ता भड्किला प्रेम गीतहरु किन किन प्यारो लाग्न थालेको छ ।
अचेल धेरैले गम खाएर सोच्न बाध्य छन् कि …? राज्य सत्ताको स्वरुप नै कस्तो हुँदो रहेछ, सबैलाई उत्सुकताको बिषय छ । सत्ता नपाउदा सम्म त्यहि लुटतन्त्रको गित गाउने तर सत्तामा पुगेपछि त्यहि लुटतन्त्र बिरोधि गितमा प्रतिबन्द लगाउने, त्यो अचम्म ब्यबस्थाको स्वाद चाख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला ? सायद यहि सोंच मलाई झैँ अरुलाइ पनि पलाएको हुनुपर्छ ।
बलिउड फिल्म नायकमा सुपर स्टार अनिल कपुरले २४ घण्टाका लागि देशको प्रधानमन्त्री बने जस्तै यो व्यबस्थाको अनुभूति गर्ने रहर हरेक संग छ !
देशको प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत म संग छैन तर देशको सांसद बन्ने हैसियत भने म संग पनि छ । त्यसैले एक दिनका लागि सांसद बन्न रहर छ, अनि केवल जान्नु छ कि ? सत्तामा पुगेपछि लुटतन्त्रका गित माथि प्रतिबन्द गर्नु पर्ने रहस्य के रहेछ भनेर !
किन भने आज पशुपति शर्माले ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ भन्ने गित गाउँदा उनको गित प्रतिबन्द भएको छ । अर्थात कम्युनिष्ट सरकारले प्रतिबन्द गरेको छ । राज्यले आधिकारीक प्रतिबन्दको कसी नलगाए पनि आन्तररिक हत्कण्डाहरुको प्रयोग गरेको छ । सरकारको आन्तरिक ह्विपलाइ बिशेषगरि पुर्वएमालेहरु नै सामुहिक रुपमा प्रयोगगरि पशुपति शर्मा बिरुद्द उत्रिएका छन् ।
राजनीतिक भाषामा भन्नु पर्दा पशुपति शर्माको गित हिजो कम्युनिष्टहरुले गाउने क्रान्तिकारी गित जस्तै हो । ब्यथितिका बिरुद्द गाइने गितलाइ जनताका गितहरु हुन् भनेर कम्युनिष्टहरुले नै परिभाषित गरेका हुन् । जुन गित हिजो मदन भण्डारीले राजा महेन्द्रका बिरुद्द केपी ओलीको पुस्तालाई गाउन सिकाएका थिए ।
महेन्द्रका छोरा बिरेन्द्र राजागद्दीमा सवार हुँदा केपी ओलीले सांसद शान्ता चौधरीहरुको पुस्तालाई पनि यसैगरी लुटतन्त्रका र विसंगतिका बिरुद्द गित गाउँन सिकाएकै हुन्।
बिडम्बना के भयो भने, पशुपति शर्माले गायको गित ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ युटुबमा आयपछि बिरेन्द्रको उछितो कारेर सांसद भएकी शान्ता चौधरीले आफ्नो फेसबुकवाट निकै कुर्लेको देखेर मलाई दया लाग्यो ।
लुटतन्त्र बिरोधि गित किन गाएको भन्दै चौधरी १० हात बुरुक्क उफ्रिनु भएको छ । उनि मात्रै होइन सिंगो पुर्व एमाले जगत नै उफ़्रिएको छ ।
पशुपति शर्माको गितले सारमा देशमा भैरहेको लुट तन्त्रलाइ व्यंग्य प्रहार गर्दै गित बनाएका छन् । समग्रमा यो क्रान्तिकारी गित पनि हो । ब्यथिति बिरुद्द सचेतना जगाउने गित हो ।
स्मरणहोस् ! नेपाली भूमिमा सबै भन्दा पुरानो कम्युनिष्ट पार्टी एमाले हो । पुरानो व्यवस्थाका बिरुद्द गाउबस्तिमा लुटतन्त्रका गित गाउन सिकाउने पनि सबै भन्दा पहिले एमालेले नै सिकाएको हो । माओबादि त पछि जन्मिएको हो । यहि लुटतन्त्रको गित गाएर मनमोहनको नेतृत्वमा नौ महिने सरकार पनि पाएको थियो ।
तर त्यहि एमालेलाई लुटतन्त्र बिरोधि गित आज किन पचेन ? यो चाहि अचम्मै भयो !
जेबी टुहुरेका गितहरुलाइ हतियारको रुपमा प्रयोगगरि पुरानो ब्यबस्था बिरुद्द ‘गाउ-गाउबाट जुट, बस्ति बस्तिबाट जुट, यो देशको मुहार फेर्नलाई जुट’ भन्दै जनता जगाए । व्यवस्था फेर्ने गित गाउनेहरु सत्तामा पुगेपछि उस्तै लुट चलिरहदा पशुपति शर्माहरुले कुनै पार्टीको झोला नबोकेर गित गाउदा, उनले गित नै हटाउनु पर्यो ।
किन भने युटुबवाट गित नहटाए उनको ज्यूँउदो लाँस हुनेछ ।
कुनै पार्टीको झोला बोकेर यो गित गायको भए, यो गीतलाई ढाल्न सक्ने कसैको बाउको तागत हुने थिएन । उनि स्वतन्त्र कलाकार भएर गित गाउदा आफ्नो गित आफैले हरण गर्नु पर्यो ।
नेपालमा राजनीतिलाई नचाहेर पनि कुनै राजनीतिको कभर लिनुपर्ने बाध्यता यसकारण बनेको छ । यो ब्यबसाय संग अझ बिशेष जोडिने गर्छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाइ अपमान भयो भन्दै पशुपति शर्माका बिरुद्द उत्रिने झोलेहरुलाइ एउटा प्रश्न छ । के यो देशमा लुट तन्त्र चलेको छैन त ? त्यसो भए वाइडवडी प्रकरण, ३३ किलो सुन प्रकरण, एरपोर्ट प्रकरणहरु कुन तन्त्रका हड्डीहरु हुन् ?
अख्तियारी भएका भ्रस्टचारका मुद्दाहरु चाहि कुन तन्त्रका उपहार हुन् ?
लुटतन्त्रका बिरुद्द लड्ने कम्युनिष्टहरु त्यहि लुटको धन्दामा लागे पछि लुटको गित गाउन नपाइने व्यवस्थालाई निरंकुश ब्यबस्था भनिन्छ । हिजो राजतन्त्र फाल्दा राजालाई यमराज बनाएर गालि गर्ने शान्ता चौधरीहरुले अब उत्तर दिनु पर्छ । के राजतन्त्र फाल्दा फूलपाती चढाएर फालेका हौ कि रगतको खोलो बगाएर फालेका हौ ? त्यहि राजनीतिक जिबन पद्दति र चक्रब्युह हरेक राजनीतिक जिबनमा लागु हुन्छ याद गर्नुस ।